ओबामाविरुद्ध खनिँदा ट्रम्पले के पाउँछन् ?
२०७७ जेठ १३ मंगलबार ०६:११:००
बाइडेनको ओबामासँग घनिष्टता छ र ओबामा अहिले पनि अमेरिकी जनताका आदर्श हुन्
लुक महामारीबाट गुज्रिरहेको छ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने ‘ओबामागेट !’ भन्दै पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामालाई अपराधी करार गर्न समय खर्चिरहेका छन् । गत साताभर ट्रम्प ओबामा उनीविरुद्ध ‘कु’ गर्न लागेका थिए भन्ने षड्यन्त्रको सिद्धान्त ट्विटरमा फैलाउँदै थिए । तर, वासिंटन पोस्टका संवाददाताले ओबामाले गरेको कार्य प्रस्ट्याउन लगाउँदा ट्रम्पले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् र भने– यो सबैलाई थाहा छ, आफ्नो बाहेक अरू पनि पत्रपत्रिका हेर्नुहोस् । ‘ओबामाको प्रशासन काण्डले परिभाषित गर्छ’ भन्दै शनिबार बिहान पनि ट्विट गरेका थिए ।
आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडेनलाई गिराउन उनी ओबामालाई गाली गर्दै छन् । ट्रम्पलाई थाहा छ, उनलाई प्रिय नेताको रूपमा लिइँदैन । उनका पिछलग्गुले रुचाए पनि उनले लिएको नीतिका कारण धेरै मतदाता असन्तुष्ट छन्, राष्ट्रपतिका रूपमा उनको कार्य सम्पादन सफल छैन । यिनको सुशासन रेटिङ ५० प्रतिशतभन्दा अधिकले गिरेको छ ।
ट्रम्पले के गर्न सक्लान् ? फैलँदो महामारी र गिर्दो अर्थतन्त्रका दौरान कसरी चुनाव जित्न सक्लान् ? त्यसैले आफ्नो विपक्षीलाई पनि आफूजस्तै ‘नालायक’ करार गरेर विपक्षीप्रति मतदाता विकर्षित पार्नु नै एउटा विकल्प हो । २०१६ मा हिलारी क्लिटनविरुद्ध पनि उनले यही गरेका थिए । उनको प्रतिष्ठा धमिल्याउन ट्रम्पले हुनेसम्म गरेका थिए । संस्थाका लागि व्यक्तिगत इमेल प्रयोग गरेका कुरासम्म बाहिर ल्याइदिएका थिए, पछि इमेलको दुरुपयोग नभएको भन्दै उनले सफाइ पाएकी थिइन् ।
अहिले बाइडेनविरुद्ध पनि उनी यस्तै गर्दै छन् । चुनौती सहज छैन । बाइडेन इमानदार जननेता हुन् र उनी धेरै व्यवधानसँग लडेर र खारिएर यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । सिनेटर तारा रिडले लगाएको यौन दुव्र्यवहारको आरोपविरुद्ध उनी सशक्तसँग उभिए र राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्न त्यसले कत्ति पनि बाधा पुगेन । बाइडेनको ओबामासँग घनिष्टता छ र ओबामा अहिले पनि अमेरिकी जनताका आदर्श हुन् ।
ट्रम्पका लागि आफ्नो विपक्षीलाई पनि आफूजस्तै ‘नालायक’ करार गरेर विपक्षीप्रति मतदाता विकर्षित पार्नु नै एउटा विकल्प हो ।
सुरुमा त ट्रम्पले बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेनको वैदेशिक व्यापारको विषय उधिनेर बाबुछोरालाई नै भ्रष्ट करार गर्ने कोसिस गरे । तर, दुवैविरुद्ध केही तथ्य फेला परेन । बरु तोप ट्रम्पतिरै सोझियो र उनलाई शक्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो । यसले बाइडेनलाई नै बल पुग्यो ।
अहिले बाइडेनलाई दोस्रो चरणको आक्रमण हुँदै छ । उप–राष्ट्रपतिको उनको कार्यकाल एउटा सबल पक्ष हो । त्यतिवेलाको इराक युद्धलगायतका पक्षमा किन मतदान गरियो भन्दै डेमोक्र्याट्सका विपक्षीले बाइडेनलाई आरोप लगाउँछन् । तर, सबैलाई थाहा छ, मतदान गर्ने काम सिनेटरको हो, उपराष्ट्रपतिको होइन ।
ट्रम्प प्रशासनको कोभिड–१९ विरुद्धको अस्तव्यस्त तयारीले नै डेमोक्र्याट्सका लागि बाइडेनलाई ह्वाइट हाउस भित्र्याउन सजिलो पारेको छ । त्यसैगरी डेलवेरको कार्यालयबाट बाइडेन आफ्नो अभियान चलाइरहेका छन् भने अहिलेको प्रशासनका खराब नीति र कार्यहरू बाराक ओबामाले औँल्याइरहेका छन् । यो सिलसिला चुनावअघिसम्म कायमै रहन्छ ।
त्यसैले पनि ट्रम्पका ओबामाविरुद्धका यस्ता प्रतिक्रिया स्वाभाविक छन् । बाइडनलाई कमजोर बनाउन पनि उनी ओबामाविरुद्ध हात धोएर लागेका छन् । बाराकको प्रशासनलाई भ्रष्ट करार गराएर उनी तत्कालीन उप–राष्ट्रपति र अबका राष्ट्रपतिका प्रत्यासी बाइडेनलाई पाखा लगाउन चाहन्छन् ।
तर समस्या यहाँ के भएको छ भने ओबामा भ्रष्ट थिएनन् । त्यस्तो कुनै तथ्य छैन । अहिलेको प्रशासनको तुलनामा ओबामा प्रशासन त्यस्तो ठूलो काण्डमा पनि मुछिएन । यति हुँदाहुँदै पनि डोनाल्ड ट्रम्पले ‘ओबामागेट’ चिच्याउन छाडेका छैनन् । यो उनको सन् २०२० को चुनावी चाल हो । अब उनले आफूलाई रुचाउनुहोस् भनेर मतदातालाई फकाउन सक्नेछैनन्, त्यसैले अघिल्लो प्रशासनको खिल्ली उडाउँदै बाइडेनको प्रतिष्ठा घटाउनु नै उनका लागि एउटा विकल्प हो ।
(जेलिजर सिएनएनका राजनीतिक विश्लेषक तथा प्रिस्टन युनिभर्सिटीका इतिहासका प्राध्यापक हुन्­)
#ओबामा # ट्रम्प
इरानले ट्रम्पविरुद्ध किन पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो ?
इरानले जारी गऱ्यो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट
महान् अमेरिका बनाउने जिम्मा ट्रम्पकै हो
ट्रम्पलाई जन्मदिनको शुभकामना
ट्रम्पका हावादारी कुरा सुन्नै नसकिने छन्
पूर्वरक्षासचिवले लगाए राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध विभाजनको रेखा मात्र कोरेको गम्भीर आरोप